Bilaw hal-ka-hal nashaadaad luuqada Jabbaan (1) Bilow nashaadaad-Dhamaystirka hawlaha [xubnaha sarrifka] --Chiba City International Association
Bilow waxqabadyada khadka tooska ah ee waxqabadyada hal-ka-mid ah ee Japan
Dhaqdhaqaaqyo hal-hal-hal ah oo Jabbaan ah Bilaw hawlo onlayn ah [xubnaha sarrifka]
Dhaqdhaqaaqa luuqada Jabbaan-ka-mid-ka-mid ah/tababarka horumarinta xirfadaha interneedka iyo kulanka sarrifka
Dhaqdhaqaaqa luuqada Jabbaan-ka-mid-mid-ka-mid ah/tababarka horumarinta xirfadaha dhaqdhaqaaqa khadka tooska ah iyo codsiga kulanka beddelka
XNUMX La xidhiidh bartayaasha Jabbaan oo bilow hawlo.
Marka warqadaha bartaha Japanese-ka ee lammaanaha isku-dhafka ah la dhammeeyo, ururku wuxuu kula xiriiri doonaa shaqaalaha sarrifka e-mail.
Marka aad hesho iimaylka, fadlan la xidhiidh bartayaasha Jabbaan ee shaqaalaha sarifka.
Markaad nala soo xiriirto, fadlan isticmaal "Japanese fudud".
Nuxurka hawsha waxaa lagu go'aamin karaa iyadoo lala tashanayo bartaha inta lagu jiro hawsha ugu horreysa, markaa marka hore go'aanso marka taariikhda iyo saacadda ugu horreysa ay noqon doonto oo bilow hawsha.
Xubnaha beddelka ee raba inay qabtaan waxqabadyada khadka tooska ah markii ugu horreysay, waxqabadyo fool ka fool ah ayaa muhiim u ah markii ugu horreysay.U sheeg qofka kale in aad samaynayso hawlo fool ka fool ah markii ugu horeysay oo aad samaynayso imtixaan xidhiidh ah.
Fadlan hoos ka hubi faahfaahinta
* Looma baahna haddii aad khibrad u leedahay dhaqdhaqaaqyada khadka tooska ah.Waxaad bilaabi kartaa hawlaha onlayn marka ugu horeysa.
XNUMX Hayso booska dhaqdhaqaaqa ee Plaza International Exchange (hawlaha fool ka-ka-fool kaliya)
Haddii aad ka diiwaan geliso furaha sirta ah ee nidaamka maamulka, waxa aad awood u yeelan doontaa in aad kaydsato meel hawleed.
Fadlan isticmaal marka aad samaynayso hawlo fool ka fool ah.
Booqo goob hawlqabad
* Waxa kale oo aad kaydin kartaa booska dhaqdhaqaaqa ee daaqada ururka.
Markaad boos sii qabsato, waxaad heli doontaa iimaylka xaqiijinta ee faahfaahinta boos celinta.
Fadlan u soo bandhig "shaashadda macluumaadka boos celinta ee soo jeedinta soo dhaweynta" ee casrigaaga miiska miiska Ururka Caalamiga ah maalinta la isticmaalayo, ama sii "shaashadda macluumaadka boos celinta ee soo jeedinta soo dhaweynta" oo daabacan qofka mas'uulka ka ah miiska miiska.
XNUMX Warbixinta waxqabadka Jabbaan (kaliya marka nashaada online la sameeyo)
Dhaqdhaqaaqyada khadka tooska ah ee hal-ka-hal nashaadyada luqadda Jabbaan, xubnaha sarrifka ayaa noo soo dira warbixinnada waxqabadka dhammaadka bisha.
Shaashada hoose, ka geli ciwaanka iimaylka ka diiwaan gashan Ururka Caalamiga ah iyo erayga sirta ah ee aad naftaada u dejisay si aad uga warbixiso hawsha.
Ka warbixi hawlaha
Ogeysiis ku saabsan tabaruceyaasha
2022.07.02iskaa wax u qabso
Waxaan raadineynaa turjubaano bulsho iyo taageeryaal tarjumaad!
2022.06.30iskaa wax u qabso
2022.05.02iskaa wax u qabso
La dhajiyay warbixinta Reiwa sanadka XNUMXaad ee mashruuca kabida dhaqdhaqaaqa sarrifka caalamiga ah / kooxda iskaashiga caalamiga ah
2022.04.27iskaa wax u qabso
Qoritaanka kooxaha codsiyada ee lacagaha kabida dhaqdhaqaaqa sarrifka caalamiga ah / kooxda iskaashiga caalamiga ah (5/23 kama dambaysta ah)
2022.03.18iskaa wax u qabso
Shaqaalaysiinta Tabarucaha Turjubaanka Yukreeniyaan / Ruush